သင့် Google Account အကြောင်း သိကောင်းစရာများ | အိုင်တီဖိုးသားလေး(နည်းပညာ)
ဗုဒ္ဓဘာသာဝင်များအားလုံး ဆောင်ထားသင့်တဲ့ Dhamma.apk ...
FacebookPassword Decryptor လေးတဲ့ဗျာ
ကိုပိုင် Music ပလေယာတစ်ခုပြုလုပ်မယ်
Website တစ်ခုလုံးကို Download ဆွဲပြီး offline ကနေဖ...
ဖုန်းတွေမှာ ဘယ်လောက်ပဲ File တွေဖျက်ဖျက် Memory Ful...
ကြားရခဲပါဘိ သီတဂူဆရာတော်ဘုရားရဲ့ ရှားပါတဲ့ lecture...
Virus တွေဘယ်နေရာမှာခိုအောင်းနိုင်သလည်း ရှာကြည့်ချ...
ဖုန်းထဲကနေ ကွန်ပြူတာအကြောင်းလေ့လာချင်သူများအတွက် C...
မြန်မာတွေအတွက် ကိုရီးယားစကားပြော အသံထွက်ပါ(စာ) For...
ဓာတ်ပုံတွေကို PDF ဖိုင်လေးလုပ်ပြီးတော့ သိမ်းထားချင...
Google Search မှာ ပိုမိုပြည့်စုံအောင် ရှာချင်ရင်.....
ဓာတ်ပုံလေးတွေကို Mp3 သီချင်းလေးတွေနဲ့ Slide Show လ...
ကိုယ်တိုင်Portable လေးလုပ်ကြတဲ့အခါ အရည်သွေးပြည့်တဲ...
Android app တွေကို အလွယ်ဖန်တီးချင်သူများအတွက်
HUAWEI U881အတွက် Root Toolလေးပါ
Viber မှာ Call & SMS Block ဆိုတဲ့ Feature အသစ်များ...
ဒီညအတွက် မင်းသားရဲ့ထူးခြားတင်ဆက်မှုလေးပါ မြန်မာသံ...
ANDROID EVERYTHING TOOL v10.0 (All Phones)
Nokia Lumina (Windows Phone) မှာ မြန်မာဖေါင့် ဘယ်လ...
ကျနော့်ရဲ့ ငယ်ဆရာ ဦးအဂ္ဂ [တောင်ငူ]ရဲ့ The Best Que...
ပိတ်ထားတဲ့ ဆိုက်ဒ်တွေကို Proxy မလိုဘဲ Web_Free Bro...
PDF ဖိုင်ကနေ JPG File,BMP File,PNG File,TIFF File ...
ADB Mask Controller V2.02a ( Android ဖုန်းတွေကို C...
တရုတ်လို facebook, youtube စတဲ့ Website တွေကို ပိတ...
ကျနော်အကြိုက်ဆုံး Call Recorder လေး
Youtube ကVideoတွေကို အလွယ်ဒေါင်းနည်း
Android အကြောင်း စာအုပ်ကလေးပါ ကျနော်နဲ့အတူ လေ့လာရေ...
Facebook သုံးတဲ့ သူငယ်ချင်းများ အထူးသတိပြုပါ
Dolphin_Browser_v.10.1.2_ For Android
Android သမား များ အကြိုက်တွေ့ စေမယ့် Android Tool ...
သင့် Google Account အကြောင်း သိကောင်းစရာများ
phone number မလိုဘဲ Gmail & fb account လွယ်လွယ်ဖွင...
Virus ကို လက်တွေ့ရေးကြည့်မယ် Mediafire ကိုအသုံးပြု...
Android ဖုန်းထဲက ကြော်ငြာတွေကိုဖျောက်ပေးမယ့် Ad Aw...
Page တခု ပြုလုပ်ရန်
Gmail acc တခုတည်းနဲ့ Fb acc များစွာဖွင့်မယ်
ဖုန်းထဲမှာ မြန်မာစကားပုံ အင်္ဂလိပ် မြန်မာapkလေးထည့်...
Apk တစ်ခုထဲနဲ့ Root ဖောက်မယ် မြန်မာစာထည့်မယ်
Auto Screen On-Of
ဖုန်းထဲမှာ ဒီဆော့ဝဲကိုထည့်ထားပြီး အင်တာနက်မြန်နှုန်...
Android တွေကို pattern lock , passward မေ့သွားရုံမ...
Facebook Virus သတ်နည်း
Samsung Android Devices တွေအတွက် Pattern Lock , Pa...
Notepad လေးတွေနဲ့ ဖိုင်ရှင်းနည်း
Batch File ကလေးတွေ ကိုယ်တိုင်ရေးချင်ကြသူများအတွက် ...
အရမ်းကို ပြီးပြည့်စုံတဲ့ Battery Doctor လေးဗျာ
Samsung Modem များစုစည်းမှု
Huawei C8813 unlock Code မတောင်းချင်သူများ (သို့)ေ...
ကွန်ပြူတာကနေ ဖုန်းထဲကို Frozen ကီးဘုတ်နှင့် Smart...
မိမိအသုံးပြုနေသော Android phone ရဲ့ ဘက်ထရီ ကြာရှည်...
fbd lite အသုံးပြူနည်း
Huawei G730 အတွက် Myanmar Font APK
အာရုံနောက်တဲ့ဖုန်းတွေ ဘလော့လုပ်ပစ်မယ် Call Blocker...
၂၁ရာစုသားရွှေဥ ဒီစာအုပ်ကလေး ဖတ်ကြည့်ပေးကြပါ
မိမိFacebook Comment မှာ Reply Button ထားရအောင်
Facebook Account အသစ်ဖွင့်ရတာ လွယ်သွားပါပြီ
Modem တည်းတွင် SIM Card မ၇ှိဘဲ အင်တာနက်အသုံးပြု့ န...
Huawei Y320-U01 Myanmar Font နှင့် Y320 U01 Offica...
GridinSoft Trojan Killer 2.2.0.4 + Key & Crack
ဘယ်သူတွေ ငါ့ကို Unfriend လုပ်ထားလဲ
AIO Root 2014
အရေးပေါင်းများစွာ ကဏ္ဍပေါင်းများစွာ ပါဝင်တဲ့ Nattali...
SIM card ရဲ့ PIN or PUK lock အကြောင်းလေးနဲ့lock ဖြ...
Posted by တော်ဝင်မင်းသားလေး | Labels: Knowledge for G-mail
အင်တာနက် အသုံးပြုသူတိုင်းနီးပါးမှာ Google Account တစ်ခုစီ ရှိကြပါတယ်။ Google က နာမည်ကြီး အင်တာနက် Company ဖြစ်တဲ့အလျှောက် သူ့ရဲ့ Gmail, Search နဲ့ အခြားဝန်ဆောင်မှုများစွာ ကို အသုံးပြုသူ အရေအတွက်ဟာ များပြားလှပါတယ်။ Google က သူ့ရဲ့ ၀န်ဆောင်မှု တွေကို အသုံးပြုနေတဲ့သူတွေအတွက် ပြုပြင်ပြောင်းလဲနိုင်တဲ့ Features တွေကို ပြုလုပ်ပေးထားပါတယ်။ ဒီဆောင်းပါးမှာ အရေးကြီးပြီး သိသင့်တဲ့ အကြောင်းအရာ တွေကို အကျဉ်းချုပ် ဖော်ပြပေးလိုက်ပါတယ်။
2-Step Verification ဟာ သင့် အကောင့်ကို Password နှစ်ထပ်နဲ့ကာကွယ်ပေးထားတာဖြစ်လို့ အသုံးပြုသင့်ပါတယ်။ သင့်ရဲ့ Username, Password ကို သိရုံနဲ့ သင့်အကောင့်ကို ၀င်လို့မရပါဘူး။ ဒုတိယ Password ကို သိမှသာ သင့် အကောင့်ကို ၀င်နိုင်မှာပါ။ ဒုတိယ Password ကို Google က သင့်ဖုန်းကို ပို့ပေးမှာဖြစ်ပါတယ်။ ဒါမှမဟုတ် Google Authenticator App ကို သင့်ဖုန်းမှာ အသုံးပြုနိုင်ပါတယ်။ အဲဒီအတွက် သင့်ဖုန်း က သင့် အကောင့်အတွက် သော့တစ်ခုလို ဖြစ်နေပြီး လုံခြုံစေပါတယ်။ 2-Step Verification ကို အသုံးပြုသင့်ပြီး အောက်က လင့်မှာ ဆက်လက်လေ့လာနိုင်ပြီး Enable လုပ်နိုင်ပါတယ်။
2. Shared Endorsements
Shared Endorsements က သင့်ပုံ ကို Google က ကြော်ညာတွေမှာ အသုံးပြုမှာဖြစ်ပါတယ်။ သင်က Product or Company တစ်ခုကို +1 လုပ်တာ၊ Follow လုပ်တာ၊ Review လုပ်တာ ၊ Share လုပ်တာ တွေကိုပြုလုပ်ရင် အဲဒီ Product or Company ရဲ့ ကြော်ညာတွေမှာ သင့်ပုံကို ပြသပေးမှာဖြစ်ပါတယ်။ အဲဒီအတွက် ကြော်ညာတွေမှာ သင့်ပုံကို မပြစေချင်ရင် အောက်က လင့် မှာ Disable လုပ်နိုင်ပါတယ်။
3. Email via Google +
သင်က Google Plus က သူငယ်ချင်းတွေ ကို ဖြစ်စေ၊ Google Plus က သူငယ်ချင်းတွေက သင့်ဆီကိုဖြစ်စေ အီးမေးလိပ်စာ သိစရာမလိုဘဲ အီးမေးပေးပို့နိုင်တဲ့ Feature ကို Google က ထည့်သွင်းပေးလိုက်ပါတယ်။ Google Plus မှာ သင်မသိတဲ့သူတွေလည်း ရှိနေတဲ့အတွက် အဲဒီသူတွေ သင့်ဆီကို အီးမေး မပို့စေချင်ရင် အောက်ကလင့် က Gmail Settings ရဲ့ Email via Google + ကဏ္ဍမှာ No One ကိုရွေးပေးပါ။
Google Search မှာ သင်ရှာ သမျှကို Google က မှတ်သိမ်းပေးထားပါတယ်။ Privacy အရ မသိမ်းပေးထားစေချင်ရင် အောက်က လင့် မှာ Disable လုပ်နိုင်ပါတယ်။ အရင်ရှာထားတဲ့ မှတ်တမ်းတွေကို လည်း အဲဒီ လင့် မှာ ဖျက်ပစ်နိုင်ပါတယ်။
5. Account Permissions
Google Account ကို Access လုပ်ခွင့်ပေးထားတဲ့ Devices, Apps, Services , Products တွေကို အသုံးမပြုတော့ရင် Revoke လုပ်သင့်ပါတယ်။ သင့် အကောင့် လုံခြုံရေးအတွက် ဖြစ်ပါတယ်။ အောက်က လင့် ကိုသွားပြီး အသုံးမပြုတော့တဲ့ အရာတွေကို အမြဲစစ်ဆေးပြီး Revoke လုပ် သင့်ပါတယ်။
Recent Activity Page မှာ Sign ins သတင်းအချက်အလက်တွေ၊ Passwords ပြောင်းလဲတာတွေ စတဲ့ အရေးကြီးတဲ့ Activities တွေကို ပြသပေးထားပါတယ်။ Activity တစ်ခုချင်းစီအတွက် ရက်စွဲ နဲ့ တည်နေရာ ကို ပြသပေးထားပြီး သင့်အကောင့် လုံခြုံရေးအတွက် အမြဲ စစ်ဆေးသင့်ပါတယ်။
7. App Passwords
2-Step Verification ကို အသုံးပြုသူတွေအတွက် အချို့ Programs , Services တွေဟာ 2-Step Verification ကို Support မပေးတဲ့အတွက် Application Passwords ကို အသုံးပြုရပါတယ်။ App Passwords တွေဟာ ကိုယ်တိုင် ပြုလုပ်ရတဲ့ Passwords တွေဖြစ်ပြီး တစ်ခုပဲပြုလုပ်စရာလိုပါတယ်။ ဒါပေမယ့် App Password တွေကို တစ်ခုထက်ပြုလုပ်နိုင်ပါတယ်။အောက်က လင့် မှာ App Password တွေကို ပြသပေးထားပြီး မလိုအပ်တာတွေကို Revoke လုပ်နိုင်ပါတယ်။
သင့် Password ကို တစ်ခြားသူက သိသွားရင်ဖြစ်ဖြစ် Hack ခံရတယ်လို့ ထင်ရင် ဖြစ်ဖြစ် အောက်က လင့် မှာ ပြောင်းလဲသင့်ပါတယ်။